Maqaallada ku saabsan Danmark
Safarka Danmark: hage loogu talagalay safarka Denmark
December 1, 2020 Maitri Jha Denmark, safarka
'Danmark', waa waddan wanaagsan oo fudud oo u safraya safarka. Dalku wuxuu leeyahay buuro, haro iyo dhul xeebeedka laamiga ah; Waxay leedahay muuqaal qurux badan sida buuraha cad ee Mons Klint. Sidoo kale, waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan Denmark waa inay nadiif tahay
Sida loo helo shaqo Danmark.
November 16, 2020 Antika Kumari Denmark, shaqo
Waxaa jira dariiqooyin badan oo ardayda ajnebiga ah ee qalin jabisay ay shaqo uga heli karaan Danmark. Waxay kuxirantahay dhalashadaada, uma baahnid sharci deganaansho ku meelgaar ah. Haddii aad ka timid waddan kale, markaa waa inaad haysataa fiiso sax ah. Shaqooyinka
November 9, 2020 Antika Kumari Denmark, fiisada
Danmark, si rasmi ah Boqortooyada Danmark, waa waddan Waqooyiga Yurub ah. Danmark saxda ah, taas oo ah tan ugu hooseysa waddamada Scandinavia. Waxay kuxirantahay safarkaaga Danmark, noocyo fiisooyin kaladuwan ah ayaa lagu dabaqi doonaa munaasabadda. Haddii aad qorsheyneyso
Booqashada Danmark, Hubi Waqtiga ugu Fiican ee aad Soo booqato
June 9, 2020 Maitri Jha Denmark, safarka
Wakhtiga ugu wanaagsan ee la booqdo Danmark waa xagaaga hore, oo leh xagaaga wanaagsan iyo daruuraha cad. Waad qorsheyn kartaa safarkaaga bisha Juun. Maaddaama ay maalmuhu sii dheeraanayaan bisha Juun dhexdeeda, waxaad ku samayn kartaa waxqabadyo badan oo bannaanka markaas ah
Raadinta Bangiyada ugu fiican Denmark?
Waxaa laga yaabaa 22, 2020 Maitri Jha Denmark, lacag
Danmark waxay leedahay waax bankiyo balaaran. Sababta oo ah dadka deenishka ayaa doorbida inay hantidooda dhigtaan bangiyada guryaha. Sidoo kale, waaxda bangiyada gudaha ee dalka Denmark ayaa leh 87.52% wadarta guud ee hantida warshadaha. Ka tagida bangiyada shisheeye oo haysa kaliya 12.48%.
Hagaha Gaadiidka ee Danmark, Scandinavia
Waxaa laga yaabaa 16, 2020 Antika Kumari Denmark, soo qaado
Danmark waa dal ka kooban jasiirado badan. Jasiiradahani waxay si aad ah ugu xiran yihiin magaalada. Kaliya maahan magaalooyinka iyo magaalooyinka Danmark hada isku xidha, laakiin meela badan oo Yurub iyo daafaheeda ahba way gaari karaan Danmark
Sidee Loo Dalbadaa Magangalyo Danmark?
Waxaa laga yaabaa 13, 2020 Maitri Jha Denmark, qaxootiga
Ma dooneysaa inaad ka dalbato Denmark magangalyo intii aad joogi laheyd wadanka. Danmark way u furantahay ajaanib kasta oo raba inuu soo gudbiyo dalab magangalyo. Laakiin ma codsan kartid haddii aad joogto waddan kale
Muuqaalada ugu Fiican Dukaanada Danmark
Danmark waa meesha leh dukaamo badan oo qurux badan iyo dukaanno moodada qurxiya. Dukaamadan ayaa ku baahsan Kobanheegan. Caasimadda deenishka waa meel laga dukaameysto oo loo yaqaan 'fashionista' ama naqshadeeye kasta oo jecel oo soo jiita qaab dhismeedka deenishka ee ugu yar. Mararka qaarkood,
Dalxiisayaasha Sare ee Dalxiis ayaa booqanaya Danmark
November 13, 2019 Shubham Sharma Denmark, wax in la sameeyo
Danmark waa wadan yar oo Scandinavian ah. Waddanku wuxuu ka kooban yahay muuqaal qurux badan oo dalxiisayaashu ay ku dhex qoyn karaan quruxda dabiiciga ah ee ku xeeran. Dalkan waxaa lagu maneystey isku dhafnaan qaabdhismeed hal abuur leh, muuqaal qurxoon, mid gaar ah oo weyn